KỌMPUTA NGWUDATA EGWU EGWU KỌMPUTA - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mmemme kacha mma maka ịmara egwu na kọmputa
Mmemme maka ịchọ egwu na-enye gị ohere ịmata aha nke egwu site na ụda site na ya ma ọ bụ vidiyo. Site na ngwaọrụ ndị a, ị nwere ike ịhụ egwu ịchọrọ na sekọnd. Enwere m mmasị na egwu ahụ na fim ma ọ bụ azụmahịa - ha malitere ngwa ahụ, ma ugbu a, ị maraworị aha na onye na-ese ihe.
Ọnụ ọgụgụ nke mmemme kachasị elu maka ịchọgharị egwu site na ụda abụghị ihe dị ukwuu. Ọtụtụ ngwa enweghị ezigbo nyocha ọchụchọ ma ọ bụ obere ọnụ ọgụgụ dị n'ọbá akwụkwọ. Nke a na-eduga na eziokwu ahụ bụ ịmata na egwu ahụ anaghị ada ada.
Nyochaa a nwere nanị ngwọta kachasị elu maka ịmara egwu na kọmputa nke ga-achọpụta ngwa ngwa ihe egwu na-akpọ na ekweisi gị.
Snezam bụ ngwa nyocha ọdịyo n'efu na-adabere na ya bụ nke na-enweta nanị na ngwaọrụ mkpanaka na nso nso a kwaga na kọmputa nkeonwe. Shazam nwere ike ịchọpụta aha abụ na egwu - dị nnọọ gbanwee ihe sitere na egwu ma pịa bọtịnụ ntinye.
N'ihi akwukwo ihe omimi nke usoro ihe omume a, o puru ichota ogwu ochie na nke oma. Ngwa ahụ na-egosiputa egwu egwu akwadoro maka gị, dabere na akụkọ ihe mere eme nke ọchụchọ gị.
Iji jiri Shazam, ị ga-achọ ịmepụta akaụntụ Microsoft. Enwere ike ịdenye ya aha n'efu na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ.
Ihe ọghọm nke ngwaahịa ahụ gụnyere enweghị nkwado Windows dị n'okpuru mbipute 8 na ike ịhọrọ asụsụ asụsụ Russian.
Ihe dị mkpa: Shazam adịghị adị nwa oge maka nrụnye site na ụlọ ahịa ngwa ngwa Microsoft.
Ihe omumu: Otu esi muta egwu site na vidio vidio na Shazam
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta aha nke abụ site na faịlụ ma ọ bụ vidiyo, gbalịa Jaikoz. Jaikoz bụ usoro ihe omume iji mata egwu site na faịlụ.
Ngwa ahụ na-arụ ọrụ dịka ndị a - ị gbakwunye faịlụ ma ọ bụ faịlụ vidiyo na ngwa ahụ, malite mmata, na mgbe oge ụfọdụ Jaikoz chọtara ezigbo aha nke abụ ahụ. Na mgbakwunye, ihe omuma ndi ozo banyere egwu a gosiputara: onye ogwu, akwukwo, oge nbuta, gen, wdg.
Ihe nkwụsịtụ gụnyere enweghị ike nke mmemme ahụ iji rụọ ọrụ na ụda a na-akpọ na kọmputa ahụ. Jaikoz na-arụ ọrụ nanị faịlụ ederede. Ọzọkwa, a gaghị asụgharị interface ahụ n'asụsụ Russian.
Tunatik bụ n'efu, obere usoro egwu egwu egwu. Ọ dị mfe iji - naanị otu ngwa bọtịnụ na-enye gị ohere ịchọta egwu site na vidiyo ọ bụla. N'ụzọ dị mwute, ngwaahịa a adịghị akwado ndị na-emepe emepe, n'ihi ya, ọ ga-esi ike ịchọta egwu nke oge a na-eji ya. Ma ngwa ahụ achọtara abụ ochie.
Kọmputa nchọpụta egwu ga-enyere gị aka ịchọta egwu ịchọrọ na vidio YouTube ma ọ bụ ihe nkiri kachasị amasị.